Imililo eyingozi nokufudumala emhlabeni wonke – okunye okusongela abantu | Scrolla Izindaba
Imililo eyingozi nokufudumala emhlabeni wonke – okunye okusongela abantu
Ngenkathi unyaka wezi-2020 uzobhekwa njengonyaka lapho umhlaba waguqiswa ngamadolo yigciwane le-corona, olunye usongo ebantwini lwalusondele kakhulu.
Izinhlekelele zemvelo ezibangelwe ukufudumala komhlaba okwenziwe ngabantu kube yinto evamile nokho enganakwa unyaka wonke.
Umlilo wase-Australia, owaqala ngoNhlangulana ngowezi-2019 kuya KuNhlaba kowezi-2020, uholele kumahektha angaphezu kwezigidi eziyi-18 omhlaba oshisiwe. Bangama-479 abantu abalahlekelwe yizimpilo zabo, ngenxa yokusha noma ukuhogela intuthu, kanti ezinye izimpilo zaba zathinteka kabi.
Ochwepheshe balinganisela ukuthi kwabulawa izilwane eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1,25, zalimala noma kwacekelwa phansi indawo yazo kule mililo.
Sekuyisikhathi eside ososayensi bephikisana ngamazinga okushisa anyukayo, abangelwa ukukhishwa kwamagesi abamba ukushisa kusuka ekusetshenzisweni kwamandla kanye nezinqubo zezimboni, kube nomthelela emililweni evamile futhi enamandla kakhulu.
I-California ibuye yabona izindawo eziqoshiwe zomhlaba ezishiswe yimililo yasendle enamahektha ayizigidi ezine kowezi-2020, iphinda kabili irekhodi langaphambilini lamahektare acishe abe yizigidi ezimbili asethwe ngowezi-2018.
Imililo iphinde yacekela phansi izinkulungwane zamakhilomitha-skwele amahlathi emvula ase-Amazon ngisho nezingxenye zase-Siberia eziqopha amazinga okushisa aphezulu.
Izikhukhula zasogwini nazo bezilokhu zanda, ochwepheshe bedalula ulwandle olukhulayo nemvula enamandla njengembangela.
NgoLwezi, izikhukhula neziphepho zacekela phansi izindawo ezinkulu e-Philippines. Isikhukhula manje sithinte izifunda eziyisishiyagalombili nabantu abayizigidi ezintathu, ngokusho kwehhovisi lezenhlalakahle leNhlangano Yezizwe.
Lezi zinhlekelele zizokwenzeka kaningi futhi zizoba zimbi kakhulu ngonyaka wezi-2021. Azigcini nje ngokuba yingozi ngqo empilweni yabantu, kepha zizodala izinkinga zokufuduka kwabantu abaningi njengoba izingxenye ezinkulu zomhlaba kuzobe kungahlaleki kuzo.